Daawo Qaad la’aanta Muqdisho iyo saamaynta uu reebay+ Hees Qaadka ka hadleyso - Hablaha Media Network
Daawo Qaad la’aanta Muqdisho iyo saamaynta uu reebay+ Hees Qaadka ka hadleyso
HMN:- Shantii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho kama degin wax khaat ah, gaar ahaan jaadkii laga keeni jiray dalka Kenya oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadyadii imaan jiray Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Magaalada ayaa u muuqata mid dagan oo ka nasatay sawaxankii iyo buuqii gawaarida khaatka sida.
Ganacsatada iyo muqayaliinta khaatka ayaa go’aanka dowladda ay ku joojjisay sida kmg ah ayaa ka carooday tallaabada ay dowladda u qaaday joointa khaatka, waxayna ganacsatada ay ku doodayaan in caruur ay ku korsan jireen, waxbarashana ay ugu dhiibi jireen, dowladdana looga baahnaa in marka hore ay daboosha baahida dadka ku tiirsan ganacsiga khaatka.
Khaat baarixi ah oo maalmo wadada kusoo jiray ayaa la keenaa Muqdisho, kaasoo marduufkii si baryo ah loo iibiyo $60.
Magaalooyinkaay ka mid tahay Kismaayo ayaa doon lagu soo geliyaa khaatka, halka dhinaca Puntland si dhuumasho ah ay diyaarad hal ama labo ay kasoo degto.